Xamuulka waddooyinka la isaga gudbiyo oo soo kordhaya mustaqbalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xamuulka waddooyinka la isaga gudbiyo oo soo kordhaya mustaqbalka
La daabacay torsdag 30 januari 2014 kl 09.30
Waxaa mustaqbalka aad u soo kordhi doona xamuulka ay gawaarida waaweyni isaga gudbiyaan waddooyinka maadaama uu hoos u dhac ku imanayo kharashka xamuulka waddooyinka, isla markaas ay qaali noqonayaan badeecada lagu diro tareenada iyo diyaaradaha. Sababta ugu weyn oo keentay in isticmaalka gawaarida waaweyni kordhaan ayaa ah mushaarooyinka dareewalada oo hooseeya, sida ay qabaan khubaro arrintaan baartay.
– Waxaa hadda noo muuqda bilowgii kororkii xamuulka lagu qaado gawaarida waaweyn. Mustaqbalka waxaan arki doonnaa koror dheeraad ah. Sidaasna waxaa yiri Henrik Sternberg oo ah caalin ku takhasusay gaadiidka oo ka hawlgala jaamacadda Lund.
Tirakoob laga helay wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinku wuxuu muujinayaa in sannadkii 2013 uu hoos dhac ku yimid xamuulka lagu qaado tareenada iyo doonyaha, halka uu xamuulka lagu qaado gawaarida waaweyn uu xoogaa kor u kacay. In ay sidaas ahaatana waxaa sabab looga dhigayaa isbeddelka ku yimid kharashayada, sida uu sheegay Henrik Sternberg.
– Waxaa si cad u muuqda in kharashka gaadiidka badda iyo gaadiidka tareenadu uu sare u kacay halka uu kan gaadiidka waddooyinku hoos u dhacay.
Haddii ay noqoto in shirkaduhu kala doortaan in ay kharash yar ama mid badan ka bixiyaan dhoofinta badeecadahooda, waxaa iska cad in ay dooranayaan kan ugu raqiisan, ayuu Henrik Sternberg yiri isagoo hadalkiisa sii wata:
– Sida ay hadda u muuqato waxaa jira shirkado badan oo ku tartamaya. Haddaan tusaale u soo qaadanno shirkadda dukaamada waaweyn ee Coop oo markii hore faa’iido ku qabay in ay badeecooyinka ku rartaan gaadiidka tareenada, ayey hadda u muuqataa mid wax ku ool ah in ay adeegsadaan gaadiidka waddooyinka mar haddii qiimahoodu uu hoos dhac ku yimid.
Sicirka xamuul-qaadidda waxaa hoos u dhigaya gawaarida waaweyn oo soo batay ahna kuwo tayo wanaagsan. Waxaa kaloo soo kordhay tartanka gawaarida waaweyn oo dalalka ka yimid iyo mushaarooyinka dareewalada oo hooseeya.
– Marka la eego dareewalada ka yimaada dalalka Bulgaariya iyo Roomaaniya waxaas dareewaladaas ku baxa kharash boqolkiiba 25 ilaa 30 ka yar kan ku baxa dareewalada Iswiidhen. Sidaasna waxaa yiri Henrik Sternberg oo caalin ka socda jaamacadda Lund.